Wararka - Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya xaashida galvanized iyo xaashida birta ahaanta leh
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya xaashida galvanized iyo xaashida birta ahaanta leh
Saxanka birta ah ee galvanized waa inuu ka fogaadaa dusha saxanka birta qaro weyn ee la xoqay, iyo kordhinta noloshiisa waxtarka leh. Dusha sare ee saxanka birta qaro weyn waxaa lagu dahaadhayaa lakabka birta zinc, nooca noocan ah ee zinc dahaaran saxanka birta ah ee qabow waxaa loo yaqaan saxanka galvanized.
Waxyaabaha birta ah ee galleyda kulul lagu duubay ayaa loo isticmaali karaa warshado badan oo kala duwan:
1. Warshadaha wax soo saarka sida dhismaha injineernimada, warshadaha fudud, baabuurta, beeraha, xanaanada xoolaha, kaluumeysiga iyo warshadaha adeega ganacsiga.
2. Warshadaha dhismaha oo u baahan inay soo saaraan badeecooyin u adkaysta daxalka ama saqafka midabka dhismaha ee warshadaha iyo saqafka Grid.
3. Caawinta warshadaha qalliinka si loo soo saaro qalabka guryaha, qiiqa madaniga ah, sahayda jikada, iwm.
4. Warshadaha baabuurta ee ubaahan inay soo saaraan qaybo ka mid ah waxyaalaha u adkaysta daxalka baabuurta, iwm.
Hawlaha muhiimka ah ee beeraha, xannaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ayaa ah keydinta, gaadiidka, iyo qaboojinta hilibka iyo cuntada badda, iwm. Adeegyada ganacsiga ayaa muhiim u ah keydinta iyo daabulidda sahayda, agabka baakadaha, iwm.
Saxanka birta ahama wuxuu muujinayaa iska caabintiisa gaaska, uumiga, biyaha iyo walxaha kale ee daciifka ah ee waxyeelleeya iyo aashitada, alkali, milix iyo walxo kale oo kiimiko ah oo daxalasada birta, magac kale oo ka sameysan birta birta ah waa birta u adkaysata aashitada. Ficil ahaan, birta u adkeysata daxalka waxaa badanaa lagu magacaabaa birta birta ah ee birta ka sameysan, birta u adkeysatana daxalka waxaa loo yaqaan birta aashitada u adkeysata.
Saxanka birta aan xarka lahayn ayaa badanaa loo qaybiyaa dhowr qaybood, oo ay ku jiraan birta austenitic, birta birta ah, birta birta ah, birta birta ah - qaab dhismeedka biraha (laba wajiga) saxanka birta ah iyo saxanka saxanka adag ee adag. Intaas waxaa sii dheer, sida ku cad halabuurka, waxaa loo kala qaybin karaa saxanka birta ee birta ah, chromium nickel plate steel ahama iyo chromium manganese nitrogen plate steel ahama.